Siduu udhacay weerarkii ugu khasaaraha badan abid ee dunida oo kadhacay New York 11th September. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaSiduu udhacay weerarkii ugu khasaaraha badan abid ee dunida oo kadhacay New York 11th September.
Shalay oo kale 18sano kahor (9/11/2001) waxaa gudaha Maraykanka ka dhacay weerarkii argagixiso ee caan baxay ee 9/11. Weerarkan ayaa lala beegsaday xarumihii ganacsiga ee mataanaha ahaa ee New York ku yiillay iyo xaruntii difaaaca Maraykanka ee Pentagon-ka ee Arlington ku taallay iyo goobo kale.
Afar diyaaradood oo nooca rakaabka ah oo ay lahaayeen labada shirkadood ee American airlines iyo United, ayaa kasoo duulay madaarada waqooyi bari Maraykanka iyagoo ku wajahnaa magaaloyinka Los angeles iyo San fransisco. Balse afartaba waxa intii ay duulimaadka ku jireen afduubtay 19nin oo rakaabka kamid ahaa.
Laba kamid diyaaradaha waxa lagu jiheeyay New York. Waxaana ay si aan gabasho lahayn iyaga iyo rakaabkii saarnaaba afka loo galiyay xarumihii ganacsiga ee mataanaha ahaa ee Mahattan ku yiillay. Waxaana ay ciidda ku dareen labadii darood, waxaana ku nafwaayay 2760qof dad kor u dhaafaya, oo isugu jiray dadkii ka shaqaynayay labada daarood iyo rakaabkii saarna diyaaradaha.
Diyaaradda saddexaad ayaa lagusoo wajahay gobolka Viriginia, khaas ahaan Arlington oo ay kutaallay xaruntii difaaca Maraykanka ee Pentagon-ka. Waxaana qayb kamida dhismaha xarunta ay diyaaraddu afka u gashay. Waxaana ku geeriyooday 125qof.
Diyaaradda afaraad ayaa ku wajahnayd xarunta looga taliyo Maraykanka ee aqalka cad. Balse ma aysan gaarin oo waxa ay ku burburtay meel u dhow magaalada Shanksville, gobolka Pennsylvania. Waxaana ku geeroyooday dhamaan 40-kii qof ee saarnaa.
Marka la isu geeyo tirada dadka ku dhintay weerarradas ayaa gaaaya 2,977qof iyo 19-kii afduube ee weerarka fuliyay. Waxaana ku dhaawacmay dad kor u dhaafaya 6kun oo qof. Waxaana ku burburtay hanti ka badan $10Billion.
Dhacdadaas ayaa waddo xaarid u ahayd hawlagalladii Maraykanku ka bilaabay bariga dhexe ee uu ku sheegay argagixiso la dagaalanka. Tan iyo waqtigaa kadib waxa caan baxay kalmadda ah Islaamku waa argagixiso. Waayo weerarka waxa sheegtay Al-Qaacidda. Waxaana ay dadka aadka ula socda ay tibaaxaan in dhacdadaasi ay ahayd qorshe lawada ogaa, oo dhabbaha u xaaray dano badan oo Maraykanku kalahaa siyasaddiisii dibadda.
FG: weerar argagixiso waa qeexid ku haboon dhacdo kasta oo nolosha aadamaha galaafanaysa cidii doonto ha samaysee!